राजश्व बुझाइसकेका साढे ९ लाख आवेदकले किन पाएनन् अझै लाइसेन्स ?:: Artha Dabali
राजश्व बुझाइसकेका साढे ९ लाख आवेदकले किन पाएनन् अझै लाइसेन्स ?
ललितपुर / सरकारले राजश्व बुझिसकेपछि पनि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न सकेको छैन । आवेदन दिएका झण्डै साढे नौ लाख सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीले पनि अझै चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् ।
सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ ।